ဘယ်ကွန်နက်ရှင် အတည်ငြိမ်ဆုံးလဲ — MYSTERY ZILLION
May 2011 edited May 2011 in Internet & Email
ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာ ADSL ကို Wireless Router ခံသုံးတယ်ဗျာ ... မနက်ရုံးရောက်ရင် စက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကမရဘူး ... ၉ နာရီခွဲလောက်မှာမှ အမြဲတမ်းလိုလိုစတက်လာတယ် ... တစ်ခါတစ်လေဆိုရင် ၁၁ နာရီမှစရတယ် ... အင်း ... ကွန်နက်ရှင်ရလို့ ပျော်ပြီး ဂျီမေးလ်ထဲဝင်၊ MZ ထဲဝင်ပေါ့ ... မကြာပါဘူးဗျာ ... နာရီဝက်လောက်ပဲသုံးရတယ် .. ဒေါင်းသွားပြန်ပြီကွန်နက်ရှင်က ။ စောင့်ပေအုန်းတော့ နာရီဝက် .. တစ်ခါတစ်လေ ၁ နာရီ .. တစ်ခါတစ်လေကျပြန်တော့လည်း ညနေ ၄ နာရီလောက်ကွန်ဒေါင်းသွားတာ ရုံးဆင်းပြန်တဲ့အချိန်ထိ .. စိတ်ညစ်လို့ပါဗျာ ... ဘယ်လိုင်းတွေကိုသုံးရင် stable ဖြစ်မလဲဆိုတာ အကြံဉာဏ်လေးပေးကြပါဦး ..
Wifi တာ buy မလိုက 128 mb ok
wimax ကတော့ အခု အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးပဲ ထင်တယ်။ တက်လိုက် ၊ ကျလိုက် သိပ်မရှိဘူးဗျ ။ သုံး၇တာ အဆင်ပြေတယ်။
အတည်ငြိမ်ဆုံး က local connection ပေါ့
You should do clear your phone line.
Inform telephone line man for this.
There are two segment to clear phone line.
First one segment is from Exchange office to Cabinet, that segment is used to be underground cable. Second segment is from cabinet to your office, that segment is used over head cabIe.
Those above segment are not clear, your ADSL link will be unstable.
Clearing charges may be depend on your phone line status.
Underground line segment changes charges may be about 10000.
and Over head segment changes charges may be about 5000.
All charges are undertable for phone line man.
မြန်မာနိုင်ငံကွန်နက်ရှင်အနေနဲ့တော့ အတည်ငြိမ်ဆုံး ကွန်နက်ရှင်သည် local connection ပင်ဖြစ်ပါသည်။
skynet သုံးရင်သုံး ဒါမှမဟုတ် . .McWill ဖုန်းတွေကို နယ်ဘက်တွေမှာပါသုံးလို့ရပြီလို့သိရပါတယ် . . . အဲ့ဒီ McWill ဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ကို personal သုံးရင်တော့ လိုင်းကောင်းနိုင်မယ်ထင်တယ် . ..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ဖုန်းလိုင်းတွေလာပြင်သွားတော့ မနက်မနက်ဆိုရင် သူတို့ဆီဖုန်းခေါ်စရာမလိုတော့ဘူး ... နှေးတာကတော့ သဘာ၀ပဲလေ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ
For this time of being, SkyNet is stable. I'm notaguy from SkyNet. :-D
ကျွန်တော်ကတော့ Wimax သုံးပါတယ် .. ဘာမှပြသာနာမဖြစ်ဘူး .. လုံး၀အေးဆေးပဲ .
လိုင်းမကောင်းတာလေးက လွဲရင်ပေါ့ ...
ကြိတ်မှိတ်မြိုသိပ်ရင်း .. တိတ်ဆိတ်စွာ အခန်းငယ်လေးထဲ ..
မင်းရယ် ကိုယ်ရယ် connection လေးရယ် ...
ခုလောလောဆယ် skynet (2 M) နဲ့သုံးနေပါတယ်... ဒါပေမယ့် skynet က ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ရန် .. ဥပမာ မိုးတွေတအားရွာနေရင် ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်... ခုမှစမ်းသပ်သုံးနေတာဆိုတော့ သိပ်မသေချာသေးပါဘူး ....
ကိုယ်ပဲမလုပ်တတ်လို့လားမသိဘူး skynet နဲ့ ADSL နှစ်လိုင်းပေါင်းလိုက်ရင်တော့ ရွာပါပျက်တော့တာပဲ ...
skynet က consumer နဲ့coporate က ဘာကွာလဲမသိဘူး။ လစဉ်​ေ ြကး ကတော့ တော် တော် ကွာတယ်။
သုံး နေ တဲ့ သူတွေ​ေ ြပာပေး ပါအုံး ခင်ဗျာ။ ြပီးတော့ ဆင်တဲ့နေရာ မှာ ဗန်း အြဖူ နဲ့ အြပာ ကရော ဘယ်လိုခွဲ ထားလည်း
မသိဘူး။ တစ်ချို ့က ဗန်း အြပာကို အသေး နဲ့အြကီး လည်း ရှိသေး တယ်။